Ukuphatha Ukuxhumana Ngezinkinga | Isinyathelo ngesinyathelo Infographic kusuka Martech Zone
Ngabe wake wabhekana nenkinga ebhekene nenkampani yakho? Awuwedwa. Ukuxhumana ngezinhlekelele kungakhungathekisa - kusuka empendulweni ebambezelekile ngokuqondene nokuthi kufanele uthini kuyo yonke imibono yezenhlalo eza ukuzonquma ukuthi ngabe inkinga yangempela noma cha. Kepha phakathi kwesiyaluyalu, kubalulekile njalo ukuthi ube nohlelo.
Sasisebenza nathi inkundla yokuqapha umphakathi abaxhasi eMeltwater ukuthuthukisa le infographic esabekayo ku- Izinyathelo Ezi-10 Zokuphatha Ukuxhumana Ngezinkinga. Ubuchwepheshe babo kanye nesoftware abayakhile kunikeze iqembu ulwazi oluthe xaxa lokuthi ungabhekana kanjani nenkinga yezenhlalo noma ye-PR. Okubaluleke kakhulu, ngaphambi kokuthi wenze noma yini, udinga ukuhogela, ukukhipha, bese uphinda. Hlisa umoya bese ubheka izinyathelo ezilandelayo.
Faka, Khipha, Phinda - Ungaphenduli ngokuxhamazela noma ngokomzwelo. Izinkampani zivame ukuzimba umgodi ojulile lapho zingahleleli impendulo yazo.
Kokelezela izinqola bese uzwakala nge-alamu - Hlanganisa iqembu, ubachazele ngokwenzekile, bese ulinda ukuphendula uze ube nohlelo olucacile lokwenza.
Phenya okwenzekile - Kwenzenjani? Ngabe umphakathi ucabanga ukuthi kwenzekeni? Usabele kanjani umphakathi? Yiziphi iziteshi ezidinga ukunakwa?
Qonda umthelela webhizinisi - Izinqumo zakho zizolithinta kanjani ibhizinisi, imali engenayo nedumela lomkhiqizo?
Lalela phezulu - Sebenzisa amathuluzi wokuqapha imithombo yezokuxhumana we-PR nezenhlalo ukuhlola ukushaya kwempendulo yabezindaba nomphakathi wakho.
Nquma ngesikhundla sebhizinisi kanye nemiyalezo - Manje njengoba usuyazi okwenzekile kanye nomthelela webhizinisi, usuzokwazi ukuthi uzothatha siphi isikhundla.
Yenza izinqumo kuziteshi zokusabalalisa - Kususelwa ekubekeni nasekuthumeleni imiyalezo, thola iziteshi ezihamba phambili zokulethwa, ukuthi ithimba lakho kufanele liphendule ini, nokuthi kufanele liphendule kanjani.
Khipha IZWI - Khipha umyalezo wakho.
Gada Ukuphendula futhi wenze njengoba kudingeka - Awukaqedi okwamanje. Manje udinga ukuqapha ukusabela nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele zithathwe ngokulandelayo ngokususelwa ekuphenduleni kwabezindaba nemizwa yomphakathi.
Funda kusuka ku-Inqubo - Uzofunda okusha, noma ngabe izinto zihamba kanjani.
Yize izinkampani zokugcizelela ezikhulayo zibeka kumasu okuphendula okuphuthumayo, izinkampani eziningi zibonakala zingakwazi ukulandela izinkomba eziyisisekelo zokuxhumana ngezinhlekelele: ukuya phambili kwendaba, ukuthatha isinyathelo esinqumayo, ukuhlinzeka ngezibuyekezo ezivamile nezethembekile, nokungasoli icala kwamanye amaqembu.
IMaryville University, Amathiphu Wokuxhumana Ngezinkinga Kwabachwepheshe be-PR
Bheka i-infographic engezansi ukuthola uhlelo oluhle lomdlalo ukuxhumana kwezinhlekelele, futhi uzizwe ukhululekile ukwabelana ngokuhlangenwe nakho kwakho ngezansi!
Tags: inkingaukuxhumana kwezinhlekeleleizinyathelo zokuxhumana ezibucayiinfographicamanzi ancibilikaprezimayelana Nomphakathiinkinga yezobudlelwano bomphakathiizinyathelo
Okthoba 12, 2016 ngo-9: 57 AM
Amathiphu amahle! Kusiza kakhulu!
Ngikholwa wukuthi isisekelo sokuphathwa kwezinkinga sisebenzisa ithuluzi lokulalela lomphakathi elihle (okusho uBrand24) Ngenxa yalokhu uzokwazi kuqala lapho othile esho ngawe futhi ukwazi ukusabela ngendlela efanele. Kumelwe kwenziwe kulezi zinsuku.
Ngo-Apr 3, i-2017 ku-10: i-31 PM
I-Brand24 iyithuluzi lokulalela elihle - amathani wokukhetha!